JAWAAB KU SOCOTA FAYSAL CALI WARAABE
FAYSAL CALI WARAABE SHALAY “NINKA ADIS ABEBA JOOGA AYAA IIGA DHOW NINKA MUQDISHO JOOGA, MAANTANA QORI DAB LEH”
Badhan, Sanaag, Puntland J. F. Somalia
Tan iyo intii uu dhamaaday Shirkii Mudadda Dheer u Socday umada Somaliyeed ee ka dhacay Kenya, oo midhihii ka soo Baxay uu noqday dhismaha Jamhuuriyadda DFKMG ah, waxa soo if baxayay Qoraallo fara badan, oo lagu soo daabacayay Shabakadaha Wararka Somalida, kuwaas oo xambaarsanaa diidmo iyo Mucaaridnimo Dawladda Curdinka ah. Qoraaladaasi, intooda badan maaha qoraalo laga soo fekeray lana eegay macnaha ay bixinayaan markii lagu soo bandhigo Shabakadaha Wararka, waxaadna moodaa inayba salka ku hayaan laabla kac iyo jar iska tuuris aan loo meel dayin, Qoraaladaas Waxaa ugu danbeeyay Qoraal uu maalin dhowayd Faysal Cali Waraabe ku soo daabacay Shabakabada SOMALILAND.ORG oo uu maqaal uga dhigay DOORASHADA CABILLAHI YUUSUF MA RIYAA? MISE WAA FIDMO HOR LEH ?
Hadii aynu raadraac kooban ku samayno Qoraalkaas waxa markiiba kuu soo baxaya inuu yahay mid xaqiiqada ka fog kuna qotoma cuqdad, is qarin kari wayday oodana Soo jabsatay.
Waa xaqiiq jirta in markii maamul ama nidaam la dhiso inuu yeesho Mucaarid iyo Muxaafid labadaba, hase yeeshee qofka wax mucaaradaya ama arin ka qoraya maamulkaas iyo kan ayidaya labadaba waxa looga baahan yahay inaysan ka tegin xaqiiqada lagama gudbaanka ah.
Qoraalka faysal waxa uu is lahaa(Isaga garaadkisa) cabdulahi baad ku mucaradaysaa, lakin waxa ka muuqata xumaan iyo cadawinimo fogaatay oo uu u hayo Beel ka mid ah beelaha Somalida. Sideedaba hadii qofku uu wax qorayo misana uu qabo rajo siyaasadeed damacna uu ku jiro in mar uun uu noqdo Hogaamiye, ma haboona inuu qoro ama ka hadlo wax aanu hubin kuna soo noqon karta, taas oo mustaqbalka dhow iyo kan fog labadaba saamayn ku yeelanaysa aayihiisa Siyaasadeed.
Faysal waxa uu ka hadlay Taariikh dheer lakin nasiib daro waxa uu baal maray dhabtii ama xaqiiqadii ay taariikhdaasi lahayd, waxa kale oo uu ka hadlay Dagaaladii Jabhadaha Hubaysani ay kala hor yimaadeen Nidaamkii Military-ga ahaa ee Siyaad Bare, waxa uu faanin iyo Buunbuunis cirka ku geeyay SNM iyo USC halka uu SSDF iyo SPM uu ka dhigay wax aan jirinba oo aan lahayn ujeedo iyo Macne ay ku dagaalameen. Taas waxay muujinaysaa In uu Faysal Cali Waraabe Qarsan Kari Waayay nacaybka uu u qabo Beesha DAAROOD.
Waxa uu meesha ka saaray in Dawladii Somaliyeed ay Burburiyeen Jabhadahaas hubaysnaa ee aan kor ku soo xusnay, sida xaqiiqadu tahay dhamaan waxa ay ka midaysnaayeen in ay ridaan Maamulkii talada wadanka hayey, mana ay ahayn kuwo leh nidaam iyo hab u degsan, iyo sida ay u wada shaqayn doonaan marka maamulka la rido.
Waa la ogaa wixii dhacay oo qof Somaliyeed oo ay ka qarsoon tahay ma jirto, waxa la Burburiyay wax kasta oo wadanku lahaa laga Bilaabo Xaashida ugu yar ee Wasaarad Taalay ilaa Warshadihii waawaynaa, Magacii wadanka, Sharaftiisii iyo Karaamadii Shacbiga Soomaaliyeed, waxaas oo dhib ah iyo Hagardaamo Wadanka ka dhacay waxa aabe u ahaa Ururadaas Hubaysan ee Faysal uu ku sheegay inay Malaa’ig ahaayeen, anigu kala Saari mayo lakin dhamaan waa isku Mid SSDF, SNM, USC, iyo SPM waxaana ay dhamaamtood ka midaysnaayeen in wadanka la burburiyo Qabiilna Gacanta loo galiyo.
Waxa dhacay Burburkii ugu xumaa taarikhda Somalida, inta la og yahay, waxa meel la isagu keeni kari waayay dadkii Somaliyeed ee walaalaha ahaa ee kala irdhoobay oo ninba meel uu xayn yar u goostay, 14 Sano iyo ka badan ayaa dagaal iyo burbur iyo halaag iyo anigaa sidan ah iyo reer hebel lagu jiray.
Waxa dhacay in shirkii ugu danbeeyay ee Kenya la isagu yimid, Caalamka oo idilna uu isagu Habar wacday, waxa ka soo baxay Dawlad Loo dhan yahay, qof dafiri kara wixii meesha ka dhacayna aanu Jirin, waayo 2 sano iyo ka badan ayaa loo fadhiyay oo la qodxo qaaday, caqabad kasta oo hor imanaysay shirka, waxaana dhacay Doorasho ku dhacday si waadix ah aduunka oo dhan laga daawanayay sida ay wax u dhacayeen, Somaliduna way ka dheregsanayd. Qofkii ilaah u qoray ayuunbaana ku soo Baxay oo Madax loo doortay.
Faysal Waxa uu yidhi Cabdulaahi lacag ayuu isticmaalay, oo Tollow cida kale ee Tartanka ku jirtay ma cid u diiday baa jirta oo tidhi lacag ha isticmaalina, waxa kale oo uu ka sanqadhiyay Faysal in Cabdulaahi $200,000 Bixiyay, Mar Shirku lacag la’aan noqday, waa su’aale dadwaynoow Shir umada u socday hadii qof muwaadin ah oo ka mid ah ergadii Shirka Joogtay uu bixiyo lacag lagu socodsiiyo shirka ma waxay noqotay Danbi iyo in eed looga dhigo qorshe ayuu ka wataa qofkii lacagta Bixiyay. Yaase u diidan qofkii kale ee Somali ah ee awoodi karay inuu lacag siiyo shirka “Yaab iyo Amakaag”.
Faysal Waxa uu xusay in Cabdilaahi Yuusuf iyo Beesha uu ka dhashay ee DAAROOD midna aanay Xaq u lahayn in ay Talada wadanka Wax ka qabtaan, wuxuuse iska indha tiray in waxa laga hadlayo ee loo fadhiyaa uu yahay Taladii Somalida, qof kasta iyo Qabiil kasta oo Somali ahina uu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo cida Hogaaminaysa wadanka, sharci ama Wax u diidayaana aanu Jirin.
Taariikhdu been ma sheegto mana duugowdo, tan iyo intii uu Faysal u soo ban baxay Siyaasada, waxa duuban oo la hayaa hadaladii uu ka akhriyay fagaarayaasha dadku isagu yimaadaan sida Khayriyadda hargaysa iyo meelo kale oo Yurub ah. Mar uu caayo Qabaa’ilka Soomaalida, mar uu yidhaahdo Ninka amxaarka ah ee ADIS ABEBA jooga waan is fahmi karnaa lakin kan Muqdisho Jooga isma fahmi karno, iyo wax ka sii daran.
Faysal Iyo Dadka La fikirka ah waxaan leenahay DOORASHADA CABILLAHI YUUSUF RIYO MAAHEE ADIGAA FIDMO HOR LEH ABUURAYA?
Faysal ha ogaado in Shacbiga Somalidu uu yahay kan uu ka rabo inuu ku gadho mansab Siyaasadeed sidaas darteedna wax hala hadho.
Faysal ha ogaado in reer Sool, Sanaag iyo Cayn (Dhulbahante & Warsangali) aanay ahayn ISAAQ ee Ay yihiin Qabaa’lka uu u hayo colaadda sida marar badan laga arkay hadaladiisa.
Faysal Waxaan leenahay ka shaqee Nabada iyo is dhex galka umadda Walaalaha ah halka aad ka shaqaynaysid Fidno Hor leh.
Faysal iyo dadka la fekerka ah waxaan u sheegaynaa in midnimada umadu aanay gali Karin wax gorgor tan ah, Hargays & Burco ma noqon karaan wadan gooni u taagan, marka Tareenka soo fuula Tawradii socotaye yaan la idinka tagine?
Waxaan ku soo gunaanadayaa Qormadan
Somaliya Soomaali baa leh
Hadii Silic iyo Dhib gaadho
Sareedo haday ku waarto
Samaan iyo Xumaanteed
War hooy Soomaliya Soomaali baa leh
Ninkii Kala Sooc lahoow
Ninkii Si xun u fikiroow
Adey taladii ku seegtee
Sidaad moodayso maahee
Warhooy Somalia Soomaali baa leh.
Afeef: Aragtida qoralkan waxa leh qoraaga ku saxiixan